Tery vay manta… | NewsMada
Tery vay manta…
Par Taratra sur 09/09/2017
Vola aloan’ny isam-batan’olona na fikambanana na orinasa amin’ny fanjakana, izay faritan’ny didy aman-dalàna, arakaraka ny tombam-pananana na fidiram-bolan’izay mandoa an’izany. Izay ny atao hoe hetra, raha faritana amin’ny fomba mazava sy tsotra. Ny hetra aloan’ny tsirairay no entin’ny fanjakana ampandeha ny raharaha sahaniny andavanandro.
Mahatsapa ny tompon’andraikitra ao amin’ny sampandraharahan’ny hetra fa kely na koa mihena dia mihena ny fampidiran-ketra. Malaina amin’ny fandoavan-ketra ny ankamaroan’ny olona, tsy aty an-tanan-dehibe ihany fa indrindra any amin’ny kaominina ambanivohitra. Ekena, fa eo nyhoe mety tsy fahafantarana ny adidiny kanefa tsy dia mitombina loatra izay. Nazoto nandoa hetra, tsy novozonana na noterena loatra, ohatra, ny vahoaka tamin’ny andron’ny Repoblika voalohany. Samy mahatsiaro izany, angamba ireo zokinjokiny niaina izany. Betsaka ny fotodrafitrasa (sekoly, tobim-pahasalamana, rano fisotro madio, lalana…) nitsangana vitan’ny fanjakana. Nahatsiaro nandry fahalemana ihany izy ireo tamin’izany, satria voaaro tamin’ny asan-jiolahy, ny asan-dahalo… ny ainy sy ny fananany.
Ankehitriny àry, entanina mafy handoa hetra ny tsirairay, na izay tokony handoa izany amin’ny fanjakana. Rariny loatra izany, araka ny hoe “ aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra”. Marina izany ! Fa mba aiza kosa ny tambiny e ? “Tamberin’andraikitra”, hoy ny fiteny ankehitriny. Mahazo ny farafaharatsiny amin’ny fitsaboana ve ny vahoaka, na an-tanan-dehibe izany na any ambanivohitra ? Ahoana izao faharatsian’ny lalana hatraiza hatraiza, ka mampitaraina fatratra ny tantsaha izao ? Firy amin’ny zaza malagasy no tafiditra an-tsekoly, mahazo fanabeazana maimaimpoana toy ny taloha ? Ahoana izao asan-dahalo, asan-jiolahy mirongatra hatraiza hatraiza izao, ny vonoan’olona isan’andro vaky, fitsaram-bahoaka,… noho ny tsy fahampian’ny mpitandro filaminana izao ? Lava ny lisitra raha tanisaina. Tsy tokony hahagaga raha malaina handoa hetra ny ankamaroan’ny vahoaka e, ka hanaovana tery vay manta fotsiny. Na koa poretina handoa hetra hotavanin’ny sasany.